एनएमबि बैंकलाई एफपीओ बिक्री गर्ने अनुमति, एफपिओ मूल्य कति ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
एनएमबि बैंकलाई एफपीओ बिक्री गर्ने अनुमति, एफपिओ मूल्य कति ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एनएमबि बैंकलाई एफपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । बैंकले तीन अर्ब ८० करोड १२ लाख ४९ हजार २७९ रुपैयाँ वरावरको एक करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको हो।
बैंकले प्रति कित्ता आधार मुल्य एक सय रुपैयाँमा दुर्इ सय ३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी तीन सय ३३ रुपैयाँका दरले निष्कासन अनुमति पाएको छ। यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम नागरिक लगानी कोषले गर्नेछ ।
बैंकले गत वर्षनै एफपिओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। बैंकको विदेशी साझेदार कम्पनी एफएमओको हिस्साको विषयले प्रकृया लम्बिएको थियो।तर पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले एनएमविलाइ एफपिओ निष्कासनको लागि बाटो खुला गरिदिएको थियो।
एनएमबिले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ४१ करोड १६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिक २९ रुपैयाँ ९ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १६१ रुपैयाँ २१ पैसा छ ।